အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ကျွန်တော်နှင့် သူ
အဲဒီ့ကောင်ပေါ့ ကျွန်တော်နဲ့အခုချိန်ထိ ဘယ်လိုမှ အစေးမကပ်ခဲ့တာ…။ မွေးကတည်းက အတူတူ ကြီးပြင်းလာ တော့လည်း အတူတူ…။ မွေးဖွားခဲ့တဲ့မိဘချင်းတူတာတောင်မှ သဘာဝချင်းက ဘယ်လိုမှ ဆက်စပ်မရခဲ့ဖူး…။ လူတွေအားလုံးက ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကို အမြဲတမ်း တစ်ယောက်ထဲလို့ပဲ မြင်တယ်..။ တစ်ယောက်ထဲ လို့ပဲ ထင်ကြတယ်…။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ဟာ ဘယ်တုန်းကမှ သူတို့တွေ ထင်ခဲ့သလို တစ် ယောက်ထဲ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး…။ တစ်ခါတစ်လေ ဒီကောင်နဲ့ ကျွန်တော် တူညီတာလေးတွေ ရှိခဲ့ကြဖူးပါတယ်…။ ဒါပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း အနည်းဆုံး လျှောက်လှမ်းတဲ့ လမ်းကြောင်းခြင်းကတော့ ဘယ်တော့မှ မတူညီခဲ့ကြပါ..။
အဲဒီ့ကောင်နဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ အဓိက ကွာခြားချက်ကတော့ ဒီကောင်က လူရေတစ်အားလည်တယ်…။ ပါးနပ် တယ်…။ အထူးသဖြင့် ဒီကောင့်မျက်လုံးတွေက စူးရှတယ်…။ ဒီကောင်က လောကဆိုတဲ့ အရာကို အပေါစား ကဗျာတစ်ပုဒ်လောက်တောင်မှ စိတ်ဝင်စားဖို့ မကောင်းဘူးလို့ ထင်ထားတဲ့ကောင်…။ သူ့ကိုကြည့်ရတာ လူသားတစ်ယောက်နဲ့ မတူဘူး…။ အရာရာကို အမြဲတမ်းအေးတိအေးစက်နဲ့…။ သူက သူ့ဘ၀မှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရ ဘူးတဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ ပြသနာတွေအားလုံးကို အမြဲတမ်း လူသေတစ်ကောင်ရဲ့ အေးစက်တဲ့ အပြုံးမျိုးတွေနဲ့ တုန့်ပြန်ခဲ့တယ်…။ ပြီးတော့ ပြောသေးတယ် “အဆင်မပြေမှု တစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့လို့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အပြစ် တင်ချင်တယ် ဒဏ်ခတ်ချင် တယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး ကိုယ့်ခေါင်းကို တိုင်နဲ့ပြေးစောင့်လိုက်” တဲ့..။ တော်တော် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် တွေပြောပြီး လောကကြီးကို အမြဲတမ်းကန့်လန့် တိုက်နေတဲ့ကောင်။ ဒီကောင်ဟာ ဘယ်တုန်းကမှ အရာရာကှို အလေးအနက်မထားပဲ အမြဲတမ်းပေါ့ပျက်ပျက်နဲ့…။ သူပြောနေကြစကားတောင် ရှိသေးတယ် “ လောကကို ဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာ အရာရာကို လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီး ပေ့ါပေါ့ပါးပါး ဖြတ်သန်းရမယ်” ဆိုပဲ..။ အလကားပါ..။ အမှန်က သူ့ရဲ့ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ် အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ဂလေဂချေစရိုက် တွေကို စကားလုံးတွေနဲ့ လှည့်စားထားတာပါ…။
အဲဒီ့ကောင်ပေါ့ ၂၄ နာရီပတ်လုံး ပါးစပ်ထဲကနေ စကားလုံးတွေ မဆန့်မပြဲ အမြဲတမ်း အံချနေခဲ့တာ..။ သူပြောပြောနေကြ စကားတစ်ခုရှိသေးတယ် “တကယ်တော့ လူသားတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို ဘယ်လို စကားလုံး မျိုးကမှ ပြီးပြည့်စုံအောင် မပြောပြနိုင်ပါဘူး” ဆိုပဲ။ ဒီကောင့်ကို ကျွန်တော်ကြည့်မရတဲ့ အချက်တွေ တော်တော် ကိုများပါတယ်…။ ဘာသာရေးဆိုတာလဲ ဒီကောင်က ဘာမှန်းသိတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး..။ တကယ့်ကို အရိုင်း အစိုင်းကောင်ပါ…။ သူ့ကို ဘာသာတရားကိုင်းရိုင်းဖို့ ဘုရားရှိခိုးဖို့ ပြောတဲ့သူတိုင်းကို သူက စကားတစ်ခွန်း ပြန်ပြောလေ့ရှိပါတယ် “ ခင်ဗျားတို့ကို မေးပါရစေအုံး…။ အခုခင်ဗျားတို့ ပါးစပ်ကနေ စက်သေနတ်ပြစ်သလို ရွတ်နေတဲ့ ဘုရားစာဆိုတဲ့ ပါဠိစကားလုံးတွေကို ခင်ဗျားတို့ ရွတ်သာရွတ်နေကြတယ် အဓိပ္ပါယ်ရော သိကြရဲ့လား? သြကာသ ကနေစပြီး ရွတ်လိုက်တာ အာမဘန္တေ သာရောက်သွားတယ်…။ ခင်ဗျားတို့ ဘာသိ လိုက်လဲ…။ အနှစ်သာရကိုရော သိလိုက်ရဲ့လား? ကိုယ်တိုင်ကျတော့ ဘာမှမသိပဲ ကြက်တူရွေး နှုတ်တိုက် ချ ပေးထားသလို လိုက်ဆိုနေမှ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ခေါ်ရမှာလား” တဲ့။ “မင်းကို ငါတို့က ဖြစ်သင့်တာကို ပြောပြတာ” လို့ ကျွန်တော်သူ့ကို ပြောတိုင်း “လူဆိုတာ ဖြစ်သင့်တာတွေချည်းပဲ လုပ်နေရအောင် စက်ရုပ်မှ မဟုတ်တာကွ…မသိရင်ထပ်ပြောပြမယ်..။ လောကမှာ “ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်သင့်တာ” နှစ်မျိုးပဲ ရှိတယ် ဆိုတာ လည်း မှားတယ်…။ အဲဒီ့နှစ်မျိုးအပြင် “ဖြစ်နေတာ” ဆိုတဲ့အရာလည်း ရှိနေသေးတယ်” တဲ့ ။ သေချာတယ် ဒီကောင်ကတော့ ဘယ်လိုမှကို ဆေးမမှီတော့ပါဘူး…။
တော်တော်ကို ရိုင်းစိုင်းတဲ့ကောင်ပါ…။ အဲ..။ ကျွန်တော် အဲလိုကြီးပြောရင် မတရားရာတော့ကျမယ်…။ ဒီကောင် ကတော့ အဲဒီ့အဓိပ္ပါယ်တွေကို သေသေချာချာလေ့လာပြီး သိတယ်ဗျ…။ သူက လုပ်သာမလုပ်တာ…။ သူအမြဲ တမ်း စွဲစွဲမြဲမြဲရွတ်ဆိုတာ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်..။ သူအကျင့်ဖြစ်နေတာ ၁၀ နှစ်ကျော်ပြီ။ ဘာလဲဆိုတော့ သူ မျက်လုံးနှစ်လုံးဖွင့်လိုက်တိုင်းနဲ့ ပိတ်လိုက်တိုင်းမှာ သရဏဂုံသုံးပါး တော့အမြဲရွတ်တယ်ဗျ..။ အဲဒီ သရဏဂုံ သုံးပါးရဲ့ အနှစ်သာရကို သူအရမ်း တန်ဖိုးထား နှစ်သက်တယ် လို့လဲပြောခဲ့ဖူးတယ်…။ ဒီကောင့်ရဲ့ အဲဒီ့ရိုက် ပေါက် စကားလုံးတွေကို ကျွန်တော် အမြင်တော်တော် ကပ်လာတာနဲ့ “ မင်းဆိုတဲ့ကောင်ကလေ တကယ်ကို ဒိဌိပဲ” လို့ပြောတော့ “ဟား..ဟား..မင်းဟာက မှားနေတယ် ငါ့ကောင်ရ မပြည့်စုံဘူး ဒိဌိ ဆိုတာ မြန်မာလို အမြင်လို့ပဲ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်…။ အပြည့်အစုံပြောချင်ရင် မိစ္ဆာဒိဌိ လို့ပြောရတယ်ဟ…အဲဒါမှ မှန်မှာ မင်းကပြောလဲ ပြောချင်သေးတယ်…ကိုယ်ပြောနေတာ ကိုယ်လုပ်နေတာ ဘာမှန်းလဲမသိဘူး..ဟား…ဟား” ဆိုပြီး ပြန်လှောင်တယ်လေ။ အဲလိုကောင်ဗျ…။ ကျွန်တော်လည်း ဒီလိုကောင်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ဘာမှပြောနေ စရာမ လိုတာနဲ့ပဲ ငြိမ်နေလိုက်တော့တယ်…။
ဘယ်လိုကောင်လဲ မသိပါဘူးဗျာ…။ သူ့ကိုသူ ဘာကောင်များထင်နေလဲ မသိပါဘူး…။ နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ အကြောင်းဆိုရင်လဲ သူ့လောက်ပြောတာသူပဲရှိတယ်…။ တစ်ခြားသူတွေတောင် ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ်မှ ချစ်တတ် ကြသေးရဲ့လို့လား ထင်ရအောင်ကို အဲဒီ့သကောင့်သားကပြောတယ်…။ သူမရှိရင်ပဲ နိုင်ငံက ဘယ်လိုမှ ရပ် တည်လို့မရတော့သလိုလို…။ စိတ်ဓာတ်ပြင်းတယ်ပဲ ပြောရမလား ဘာလားတော့ မသိဘူး တော်တော်ကို အစွန်း ရောက်တဲ့ကောင်ဗျ…။ သူ့ဘ၀ဦးစားပေးထဲမှာ မိဘတွေကတောင် နိုင်ငံပြီးမှ နံပါတ် (၂)အဆင့်မှာပဲ ရှိတယ်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ကျွန်တော့်နားတွေ ကွဲထွက်မတတ်အောင် သူစဉ်းစား ထားတာတွေလာလာ ပြော တယ်..။ ဘာတွေမှန်း ကျွန်တော်လည်းနားမလည်ပါဘူးဗျာ..။ ရှုပ်ရှက် ခတ်နေတာပဲ…။ ကိုယ့်အပူကိုယ်ရှာ တယ်ဆိုတာ ဒီလိုကောင်မျိုးပဲနေမှာပါ…။ တန်ရာ တန်ရာတွေး တန်ရာ တန်ရာ လုပ်ပေါ့ဗျာ…။ မဟုတ်ဘူးလား? အခုတော့ဗျာ မပြောချင်ပါဘူး..။
ဒီကောင်က အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ရင်တော့ တော်တော်စေ့စပ်သေချာတယ်ဗျ…။ သူပြောပြောနေကြ စကားအတိုင်း တကယ်ကိုလည်း အရှေ့ကိုတော်တော် လေးလေးနက်နက် ကြိုစဉ်းစားထားပုံရတယ်။ အဲဒါတော့ ကျွန်တော်သိတယ်..။ နောက်ပြီး အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ရင် စိတ်ရောကိုယ်ရောနှစ်ပြီး လုပ်တယ်..။ အလုပ်တစ်ခု မပြီးရင် ထိုင်ရာကမထဘူး..။ တစ်လောကလုံးကိုမေ့ပြီး အဲဒီ့အထဲကိုမြောနေရော...။ တစ်ခါတစ်လေ ဒီကောင် တစ်ယောက်ထဲ သူရှိုက်သွင်းပြီး မှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ ဆေးလိပ်ငွေ့(အဆိပ်ငွေ့) တွေကို ကြည့်ပြီး စကားပြော နေတာများ ရူးသွားပြီလားတောင်ထင်ရတယ်..။ ဟုတ်တယ်..။ ဒီကောင် ဆေးလိပ်လည်း တော်တော်သောက် တယ်…။ တားလို့လဲမရပါဘူးဗျာ…။ သူ့ဘေးမှာ Mild Seven ဘူး၊ သူအမြတ်တနိုး ၀ယ်ထားတဲ့ Zippo မီးခြစ်နဲ့ အတူ အမြဲတမ်းတွေ့နိုင်တဲ့ နောက်ထပ်အရာ တစ်ခုကတော့ သူ့ရဲ့လက်ထဲက ဘယ်တော့မှ မချတဲ့ သူ့အချစ် တော် Coffe ခါးခါးတစ်ခွက်ပေါ့…။
ဒီကောင့်အကြောင်းပြောရတာ (အတင်းတုတ်တယ်ပဲ ပြောပြောဗျာ) တော်တော်လည်းများသွားပြီ။ ဆက်ပြော ရင်လဲ ကုန်အုံးမှာ မဟုတ်ဘူး။ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ ဒီကောင်နဲ့ ကျွန်တော်ဘာပဲ ယှဉ်လုပ်လုပ် သူ့ကို ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှ မနိုင်ဘူး…။ ကျွန်တော်လည်း ဘယ်လိုမှကို စဉ်းစားလို့မ ရဘူး..။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း အားမရဘူး။ ဘာမဟုတ်တဲ့ ဒီလိုပေ့ါရွှတ်ရွှတ် ဂွကျကျကောင်ကို..။ အဲဒီ့ကောင်ကို ကျွန်တော် တော်တော်ကို အမြင်ကပ်ပါတယ်..။ တော်တော်လေးကိုလည်း ချဉ်ပါတယ်..။ သေသေချာချာထပ်ပြောရရင် ကျွန်တော် ဒီလောကမှာ တစ်ဦးတည်းသောနဲ့ အမုန်းဆုံးသူဟာ အဲဒီ့ကောင်ပဲ..။ ဟုတ်တယ် အဲဒီ့ကောင်..။ အဲ့ဒီကောင်..။
မှန်ထဲမှာ ကျွန်တော့်ကို မခိုးမခန့်နဲ့ လူသေတစ်ကောင်လို ပြုံးပြနေတဲ့ အဲဒီ့ ကျွန်တော်နဲ့ အဝေးဆုံး ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့် သွေးသားထဲမှာ အမြဲတမ်း လှည့်ပတ်နေတဲ့ “ ကျွန်တော်” ဆိုတဲ့ ကောင်ပေါ့ဗျာ…။
p.s- အမြင်မတော်တာများရှိလျင် အဲဒီ့ကောင်ကို တွေ့တဲ့နေရာမှာ ကြိုက်သလိုဆုံးမနိုင်ပါသည်။
Posted by Pyiet Oo Aung at 7:39 PM
ငါအရင် လာပွတ်တာ ဖတ်လို့ပီးသေးဘူး ဖတ်ပြီးမှနောက်တခါ လာပွတ်မယ် လောလောဆယ်တော့ အဲဒီ့ကောင်ကို အမြင်ကတ်တာပဲသိတယ်
အဲဒီကောင်ကို တည့်အောင်ပေါင်းနော် မတည့်လို့ရှိရင် အမြဲရန်ဖြစ်နေရပြီး ဝင်းဦး ရဲ့ ဆောင်းအိပ်မက်ထဲကလိုဖြစ်သွားအုံးမယ် ညီ့နာမည် ကလဲ အိပ်မက်မဲ ဆိုတော့ :D
ဖတ်ရင်းနဲ့ အဆုံးကြတော့ သဘောတကျ ပြုံးမိသွားတယ်။
အင်း အဲဒီကောင်က စကားတွေတော်တော်တတ်တယ်နော် အကိုများဖြစ်နေမလားမသိဘူးဟိဟိ။
အရမ်းကို စိတ်ကူးကောင်းတဲ့ကိုအိမ်မက်နက် အမြဲတမ်းအားပေးနေမယ်။
လူ့ဂွစာလို့ခေါ်ရလည်းခက်၊သူပြောတာတွေမဟုတ်ဘူး လားဆိုတော့လည်း ကိုယ့်မှာပြန်မဖြေနိုင်။ တော်တော် ဆိုးတဲ့ကောင်။ အမြင်မတော်တာရှိရင် ဆုံးမရမှာ မဟုတ်ဘူး။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ခေါ်ပြီးတောင် ပြုစုချင် သေးတယ်...တစ်နေ့နေ့ပေါ့.... :(
လောလောဆယ်အဲဒီကောင်ကိုတော့ မင်းတည့်အောင် ပေါင်းနော်။သူမှန်ထဲပြုံးပြတဲ့အခါ ပြန်ပြုံးပြဖို့မမေ့နဲ့ တော်ကြာ မင်းကိုကော်ဖီခါးခါးတစ်ခွက် မတိုက်ရင်ခက်မယ်... :P
ဟုတ်ပါ့ အဲ့ဒီကောင်.. ကြည့်မရတာကြာပေါ့..
ဟုတ်မလိုလိုနဲ့ ပုံပြောကောင်းတယ်.. အခုတော့ သူ့အကြောင်းသိသွားတော့
ကောင်းပဆိုတဲ့ ဒီပုံပြင်တွေတောင် မကောင်းနိုင်ပေါင်း ပါတော်ရယ်… :P
'''အဲဒီ့ကောင်ကို ကျွန်တော် တော်တော်ကို အမြင်ကပ်ပါတယ်..။ တော်တော်လေးကိုလည်း ချဉ်ပါတယ်..။ သေသေချာချာထပ်ပြောရရင် ကျွန်တော် ဒီလောကမှာ တစ်ဦးတည်းသောနဲ့ အမုန်းဆုံးသူဟာ အဲဒီ့ကောင်ပဲ..။ ဟုတ်တယ် အဲဒီ့ကောင်..။ အဲ့ဒီကောင်..။'''
နန္ဒာလဲ အဲဒီ့ကောင်ကို တော်တော်အမြင်ကပ်မိတယ်.....
အရာရာကို Logically ပြောပြီး သူသာသိ သူသာတတ် လုပ်လွန်လွန်းလို့လေ..
ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုလူမျိုးက ဒီလိုတွေပြောနေပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ Six Sense ထဲမှာ ကိုယ်ကိုကိုယ် သာလျှင် ''အချစ်ဆုံး'' ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်....
I think it's TRUE!!!!
မကျေမနပ်တွေ မဖြစ်ပါနဲ့။ ကိုယ့်ပြိုင်ဘက်(အထူးသဖြင့် your မသိစိတ်)ကို ကြည်ဖြူစွာ မကြည့်နိုင်ရင် ကိုယ်ပိုရှူံးဖို့ %ပိုများတယ်နော်။သတိထား!
တည့်အောင်ပေါင်း။ပြီးတော့ အမုန်းဆုံးသူက အချစ်ဆုံးသူ ဖြစ်နေတတ်တယ်နော်။ အချစ်နဲ့အမုန်းက အနီးဆုံးအိမ်နီးချင်းရယ်။ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်..ထပ်တင်မဲ့ ပို့စ်အသစ်များကိုလည်း စောင့်မျှော်လျက်ပါ။
ဝေးး...အစ်ကို ကောင်းလွန်းလို့တစ်ဘရိတ်ထဲ အသက်မရှူပဲဖတ်သွားတယ်ဗျး) တော်တော် တွေးနိုင်တဲ့ သူပဲ စကားကလည်းများလိုက်တာနော် စိတ်ချ စိတ်ချ တွေ့ ခဲ့ရင် အဲ့ဒီလုကို တီးဖြစ်အောင် တီးလိုက်မယ်ဗျ ဘုရားရှစ်ခိုးတာ ရဲ့ အနှစ်သာရကို သိရဲ့လားဆိုလို့ကျနော်ကို ပြောသလားလို့ကျနော်ဆို ဘာမှမသိ သေးဘူး ဟီးး ပေါက်ဆိန်ပေါက်ပဲ ပေါက်လိုက်တာပဲ ။
net မကောင်းတဲ့ကြားက လာဖတ်သွားပါတယ်။ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အတွေးခေါ်ကောင်းပြီးရေးထားတာထောင့်စေ့တယ်။
ိဒါနဲ့ ပြောရအုံးမယ်.......အဲ့ဒီကောင် ကျူပ်လည်းကြည့်မရဘူး။ စတာနော်......:P
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တလောကလုံးမှာ ဈတ်ဝင်စားတာလဲ တစ်ယောက်ပဲရှိတယ်တဲ့ အဲဒီကောင်ပဲမလား ဘ်သူပြောတာလဲ ဘယ်သူပြောထားတာလဲ ကဲ
ဟေ့ ... ဆေးလိပ် ဖြတ် ....
ဘာပြောရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားရင်းနဲ့ မသိတော့တာနဲ့တိတ်တိတ်လေးပြန်သွားမယ်နော်။ ရတယ်ဟုတ်။ ရပါတယ်။ ငါ့အစ်ကိုကြီးက သဘောကောင်းပါတယ်။ မှန်ထဲမှာမခိုးမခန့်ပြုံးပြနေတယ်ဆိုရင် ပြန်ကိုသိမ်းထားလိုက်ဗျ။ အေးရော။ :P စတာ။
ဘာပြောရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားရင်းနဲ့ မသိတော့တာနဲ့တိတ်တိတ်လေးပြန်သွားမယ်နော်။ ရတယ်ဟုတ်။ ရပါတယ်။ ငါ့အစ်ကိုကြီးက သဘောကောင်းပါတယ်။ မှန်ထဲမှာမခိုးမခန့်ပြုံးပြနေတယ်ဆိုရင် မှန်ကိုသိမ်းထားလိုက်ဗျ။ အေးရော။ :P စတာ။
(မှတ်ချက်။ ။ အပေါ်မှာစာလုံးပေါင်းမှားသွား၍ပြန်ရေးထားသည်။ ခွေးလွတ် အဲ ခွင့်လွတ်ပါ။ :D)
အဲ့ဒီကောင်ကို တွေ့တဲ့ နေရာမှာ ကြိုက်သလို ဆုံးမလိုက်မယ်
လောကမှာ ဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်သင့်တာ နှစ်မျိုးပဲ ရှိတယ် ဆိုတာလည်း မှားတယ်....။ အဲ့ဒီနှစ်မျိုး အပြင်ဖြစ်နေတာဆို တဲ့အရာလည်း ရှိနေသေးတယ်....အဲဒီစာသားလေးကို ကြိုက်တယ်.... (home!)
THAT'S " HIM "...... THAT'S " HIM ".....
CROSSING MY EYES TOO !
" HE " SMOKES LIKE A "CHIMNEY" !
blah blah blah..... la la la, ALL THE TIME !
NEVER... EVER... EVER... LISTEN TO ANYONE !
YET " HE " XO LOVABLE :)
black dream ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း စိတ်ဝင်စားစရာလေးနဲ့ စပြီး စိတ်ဝင်စားစရာလေးနဲ့ အဆုံးသတ်ထားတာ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဒါနဲ့ မောင်လေးပြောတဲ့ “အဲဒီကောင်” ရဲ့အရည်အချင်း တစ်ခုကျန်ခဲ့သေးတယ်။ စာရေးကောင်းတာလေး) အားပေးနေပါတယ် မောင်လေးရေ...
မနက်ကတည်းက comment ရေးမလို့ သေချာမဖတ်ပဲ မရေးချင်လို့ အခုမှ ရေးတာကွ။ D;
အဲဒီကောင်ပေါ့ ဘ၀ဆိုတာ ရောင်ပြန်ဟပ်တယ် ကြုံးဝါးပြီး ကျွန်တော်ဒေါသထွက်ရင် ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့ကောင်
ရီပြရင်လဲ သူမတူအောင် ပြုံးပြတဲ့သူပေါ့။
သူကြောင့် တူသောအကျိုးပေးတယ် ဆိုတာကို နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ နားလည်လာတယ်။ ဒါတွေကြောင့် ဒီကောင်ကို မုန်းတယ်။ ဒါတွေကြောင့် ဒီကောင်ကိုချစ်ပြန်ရော။
မင်းပြောထားတဲ့အတိုင်း အဲဒီကောင်ကို ကစ်ထုတ်လိုက်ပီ :P
For Firefox browser users - an indispensable extension
If you come across some word and you don't understand on web pages
hover your mouse on that word and Press Shift key and moveabit-
within3secs Hero Byatta will get the meaning in Burmese characters and sentence making structure in English -
so blitzing fast and very very convenientMore ... HERE